Itoobiya oo fududeysay in Maamulka Gedo taageeraan DF
LUUQ- SOOMAALIYA: Ilo kala duwan oo ku sugan Gobolka Gedo ayaa u sheegay Saxafadda uu sheegay in saraakiisha Ciidamada Itoobiya ee ka howlgala Gobolka Gedo ay ka shaqeeyeen in Maamulka iyo Ciidamadii Jubaland ee Gobolka Gedo ay u wareegaan dhinaca dowladda Soomaaliya.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa uu shir ka socday Geedka Cambaha oo u dhaxeeya labada Dooloow ee Soomaaliya iyo Itoobiya halkaas oo uu maro Wabiga.
Shirkaas waxaa ka qeybgalay maamuladda Degmooyinka Baladxaawo, Luuq iyo Dooloow Soomaaliya,waxaana ay kula shirayeen Saraakiisha Ciidanka Itoobiya ee jooga Gobolka Gedo.
Axadle ayaa ogaatay in saddexda Magaalo maamulkoodii ay Ciidamada itoobiya ka kaxeeyeen kaddib markii ay ku qanciyeen in ay taageeraan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Warar kala duwan oo ay heleyso axadle ayaa sheegaya in loo qaaday Magaalada Adis ababa mas’uuliyiintaas halka wararka qaarna ay sheegayaan in la keeni doono Magaalada Muqdisho, hayeeshee aysan wali kala caddeyn.
Guddoomiyayaasha heshiiska la gaaray Saraakiisha Itoobiyaanka ah ee kusugan Gobolka Gedo ayaa waxaa ay markii hore daacad u ahaayeen Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam kaas oo ay isku dhacsanyihiin dowladda Federaalka ah.
Sidoo kale 135 Askari oo ka tirsanaa Ciidanka Jubaland kuna sugnaa Baladxaawo ayaa saaka iska dhiibay Magaalada Luuq ee Gobolka Gedo. Waxaana ay ku biireen dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Sida uu helay axadle Saraakiisha Ciidanka Itoobiyaanka ah ayaa maamulka Degmooyinkaas maalmihii la soo dhaafay ku wargeliyay in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ciidamo ay keeneyso gobolka lana socdaan.
Mas’uuliyiinta ay wadahadalka saddexda maalmood la lahaayeen Saraakiisha Itoobiyaanka ah ayaa waxaa ay isku heyb yihiin Wasiirka amniga Jubaland ee ku xiran Magaalada Muqdisho. Kaas oo dowladda Soomaaliya diyaarad uu la socday ka reebtay 31kii August 2019.
Maamulka Jubaland ee ay Itoobiya dhabarjebinta uga sameysay Gobolka Gedo wali kama hadlin arrintan la xiriirta in Ciidamada iyo maamulladii saddexda degmo ee kor ku xusan ku biireen Dowladda Soomaaliya.